“Lacagta ha iska qasaarin, oo ha soo aadin Yurub” | Somaliska
Sidaa waxaa yiri gudoomiyaha midowga Yurub Donald Tusk oo digniin u diray dadka doonaya in ay qaxooti ahaan ku soo galaan Yurub. Tusk oo booqasho ku maraya wadanka Giriiga iyo Turkiga ayaa doonaya in uu cadeeyo in Yurub aysan boos u haynan qulqulka qaxootiga ku wajahan qaarada Yurub.
“Meelkasta oo aad ka soo jeedo, ha imaanin Yurub. Ha aaminin muqalasiinta oo lacagtaada ha iska qasaarinin, naftaadana qatar ha galin. Waxba meesha ma yaalaan” ayuu yiri Donald Tusk oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Athens ee Giriiga.
Tusk ayaa u sii gudbiya magaalada Ankara ee caasimada Turkey halkaasi oo uu kula kulmi doono raysal wasaaraha Turkey Ahmet Davotoglu iyagoo ka wada hadlaya shirka isbuuca soo socda dhex mari doona Guud ahaan wamada Midowga Yurub iyo Wadanka Turkiga kaasoo looga hadli doono sidii ay Turkey u xiri lahayd xuduuda badda ee ay la leedahay Giriiga isla markaana dib loogu soo celin lahaa dadka loo diiday in ay galaan Yurub.
Turkey ayaa dhinaceeda la siin doonaa lacag balaayiin dollar ah iyo in dadka u dhashay Turkey in ay viiso la’aan ku safraan qaarada Yurub ka bilaabata bisha Oktoobar.
Hadalka ka soo yeeray Gudoomiyaha midowga Yurub ayaa ah mid xoogan oo muujinaya sida ay isku badashay qaarada Yurub bilihii la soo dhaafay, iyadoo horey u isticmaali jiray erayo ka fudud kuwa hada. Sida in ay xakamayn doonaan xaalada iyo in ay qaabili doonaan qaxootiga.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa xaalad adag ka jidhay xuduuda u dhaxaysa wadanka Macedonia iyo Girigiiga halkaasi oo kumanaan qaxooti ah loo diiday in ay galaan. Marka laga reebo dadka u dhashay Syria iyo Iraq ayaa inta kale loo diiday in ay xuduuda ka gudbaan taasi oo dhalisay rabshado ay sameeyeen dadkii kale.
Waji Macbuus Waaxid
Dad iska dagan o nabad iyo wax walba haaysta ayeey guryahoodii diyaarado iyo madaafiic kusoo baa biyiiin markaas ayeey leeyihiin ha imaanina yurub Aduunka cadaalad maka jirto Qof walbow isku tasho ayaa jirta